क्राइप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति वर्णन गरिएको - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 19, 2021 फेब्रुअरी 18, 2021 ईसा शार्लोट ब्लग, व्यापार, क्रिप्टोकरन्सी सेवा, विशेष समाचार, प्रविधि
क्रिप्टो मार्फत वास्तविक विश्व सम्पत्तीहरू खरीद क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति द्वारा सुविधाजनक छ।
यसले सम्पत्तिहरूको मिश्रणलाई बुझाउँदछ जुन अर्को सम्पत्तिको रूपमा समान मान राख्छ।
यद्यपि सम्पत्तिको सट्टामा कृत्रिम सम्पत्तिले कुनै मूल्यमा सम्झौता नगरी प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छ।
बायाँ, दायाँ, र केन्द्र माथि वसन्त नयाँ टेक्नोलोजीहरूको विभिन्न अभिव्यक्तिहरू हुन सक्छन्। जे होस्, यसले केवल तब मात्र समझ ल्याउन सक्दछ यदि यसले दैनिक समस्याको आधारमा मानिसहरूले सामना गर्ने समस्या समाधान गर्दछ। प्रविधिको मूलधारको बन्ने क्षमता यसको तीव्रतामा आकस्मिक हुन्छ जुन यो अपरेशनहरूको अवस्थित ईकोसिस्टमसँग मर्ज गर्न सक्दछ।
जब यो क्रिप्टोकुरेन्सीको संसारमा आउँदछ तब यो कथन असहज सत्य हुन्छ। दिनको अन्त्यमा, क्रिप्टोकुरेन्सी वित्तको एक तत्व हो र लेनदेनको साधनको रूपमा सेवा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यहाँ धेरै "लेनदेनहरू" छन् जुन वित्तको संसारमा आशा गरिन्छ र यसले डिजिटल सम्पत्ति, स्टक, डेरिभेटिभ्स, बन्ड, वस्तुहरू, मुद्रा, फ्यूचरहरू, र ब्याज दरहरू समावेश गर्दछ।
धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् कि क्रिप्टोकुरेन्सी त्यस्तो वास्तविक-विश्व सम्पत्तिहरू किन्न सक्षम नहुन सक्छ, जुन हौंम्सुous नाफाको प्रतिज्ञा नगर्न सक्छ तर पक्कै भरपर्दो छ। क्रिप्टो समर्थकहरूको एउटा प्रयास क्रिप्टो विश्व र वास्तविक संसारको बिचमा रहेको अन्तरलाई कम गर्नु थियो, कम्तिमा सम्पत्तिको मामलामा।
एक क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति भनेको केहि व्यक्तिलाई केही क्रिप्टोकरन्सीहरू राख्नु हो उनीहरूलाई समात्न बिना नै वास्तविक विश्व सम्पत्तिहरूको विविधतामा थप जोखिम।
क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति प्रविष्ट गर्नुहोस्
क्रिप्टो मार्फत वास्तविक विश्व सम्पत्तीहरू खरीद क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति द्वारा सुविधाजनक छ। क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति के हो भनेर बुझ्नको लागि, हामीले सिंथेटिक सम्पत्ति भनेको के हो भनेर हेर्नु पर्छ।
एक कृत्रिम सम्पत्ति यसको शाब्दिक अर्थ भनेको के हो! यसले सम्पत्तिहरूको मिश्रणलाई बुझाउँदछ जुन अर्को सम्पत्तिको रूपमा समान मान राख्छ। यद्यपि सम्पत्तिको सट्टामा कृत्रिम सम्पत्तिले कुनै मूल्यमा सम्झौता नगरी प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छ। जबकि सिंथेटिक सम्पत्ति र आफै एक व्युत्पन्न हो, यसले विभिन्न डेरिवेटिभहरू जस्तै फ्यूचर, विकल्पहरू र स्वैपहरू जोड्छ जुन मुद्रा, वस्तुहरू, बन्डहरू, अनुक्रमणिकाहरू, शेयरहरू, र ब्याज दरहरू अन्तर्निहित सम्पत्तिहरूको विविध वर्ग अनुकरण गर्दछ।
व्युत्पन्नको प्रासंगिकता के हो?
यो अनुमान गरिएको छ कि व्युत्पन्न सम्झौताको विश्वव्यापी मूल्य १.२ क्वाड्रिलियन भन्दा माथि छ। यो हामी सोच्न सक्ने अन्य मुख्य प्रवाहका सम्पति भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ। उदाहरण को लागी, ग्लोबल रियल इस्टेट को बारे मा 1.2 ट्रिलियन डलर को मूल्य, वैश्विक debtण, लगभग 217 ट्रिलियन डलर, ग्लोबल शेयर बजार, लगभग tr tr ट्रिलियन डलर, र सुनको विश्वव्यापी आपूर्ति को तुलनात्मक हिसाबले ly 215 ट्रिलियन छ।
व्युत्पन्नहरू, उनीहरूले सम्पत्तिहरूबाट मूल्य जोखिम लिन मद्दत गर्न सक्छन्, शंकास्पद रूपमा बजार अक्षमता बढाउन सक्छन्। यो बजार मूल्य सिर्जना गर्नुको सट्टा व्यापारियों बीच एक शून्य योग खेल प्रोत्साहित गर्दछ। यी सबैमा, यो अस्वीकार गर्न सकिदैन कि व्युत्पन्नले लगानीकर्तालाई भौतिक ब्यवस्था, स्थानान्तरण जोखिम, व्यापारको मध्यस्थता, र मूल्यको उतार चढावको बिरूद्ध हेजिंग बिना लगानीकर्ताको लागि ठूलो आम्दानीको सुविधा दिन्छ।
कृत्रिम सम्पत्ति कसरी काम गर्दछ?
कृत्रिम सम्पत्तिले लगानी फर्महरूलाई एकल लगानी सम्पत्तिमा सीमित राख्नुको सट्टा बहु वित्तीय वाहनहरू प्रयोग गर्न सक्षम गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि स्टक खरीद गर्नुको सट्टा, एक लगानी फर्मले कल विकल्प खरीद गर्न सक्दछ र समान स्टकको पुट विकल्प बेच्न सक्दछ।
यसको अर्थ पुट विकल्पले स्टकलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ तर यो लगानी फर्म हो कि अझै शेयर छ। सिंथेटिक सम्पत्तिमा दुबै प्रथम-स्तर र दोस्रो-स्तर डेरिभेटिभको रूपमा कार्य गर्ने क्षमता छ। तिनीहरू कि त सम्पत्ति नै प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् वा सम्पत्ति को एक व्युत्पन्न।
समीकरणमा क्रिप्टो प्रस्तुत गर्दै
अब जब हामी सिंथेटिक सम्पत्तिको अवधारणाबाट सचेत छौं, कसरी यो समीकरणमा cryptocurrency लाई परिचय गर्ने थियो? यसलाई अस्वीकार गर्न सकिदैन कि यो क्रिप्टोकरन्सीको चरम अस्थिरतालाई विचार गर्दै ठूलो जोखिम हो। यद्यपि, केहि प्लेटफर्मले क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति पेश गरेर डुबकी लिने निर्णय गरेको छ।
जसरी तपाईंले अनुमान लगाउनु भएको हुन सक्छ, एक क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति भनेको केहि व्यक्तिलाई केही क्रिप्टोकरन्सीहरू राख्नु हो उनीहरूलाई समात्न बिना नै वास्तविक विश्व-सम्पत्तिहरूको विस्तृत विविधतामा थप जोखिम प्रदान गर्न। सम्पत्ती को वर्गहरू जुन हामीले डेरिभेटिभलाई सम्बोधन गर्दा कुरा गरेका थियौ क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्तीको लागि राम्रो पकड।
यी सबै क्रिप्टो इकोसिस्टम छोड्ने आवश्यकता बिना नै गर्न सकिन्छ। कृत्रिम सम्पत्ति टोकनको रूपमा उपस्थित छन् जुन क्रिप्टो क्षेत्रभित्र अवस्थित छ।
क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्तिका फाइदाहरू
हामी सबैलाई थाहा छ कि क्रिप्टोकरन्सी र ब्लकचेनले एक अविभाज्य सम्बन्ध साझा गर्छन्। सबै सुविधाहरू जुन ब्लकचेनले क्रिप्टोकरन्सीमा लागू गरेका छन्, र यसको परिणाम स्वरूप क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति पनि।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाभ क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति प्रस्ताव विकेन्द्रीकरण हो। तपाईको टोकनहरू सेन्सर गर्न वा हेरफेर गर्न सक्ने त्यहाँ केन्द्रीय निकाय छैन।
सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित र स्मार्ट सम्झौताको प्रयोग गरेर सुरक्षित छ। स्मार्ट सम्झौता प्रक्रियामा विश्वसनीयता को एक काफी डिग्री ल्याउँछ। किनकि यससँग छेडछाड गर्न सकिदैन, तपाईं आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं फर्काउनुहुन्छ यो सही छ।
क्रिप्टो र blockchain को पहुँच विश्वव्यापी छ। क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने क्षमता कुनै सीमानामा सीमित छैन। तपाईलाई सबै चाहिन्छ ब्लकचेनमा पहुँचको साथ स्मार्ट उपकरण हो, र तपाई सबै व्यापारमा सेट हुनुभएको छ!
विश्वव्यापी व्यापारको फाइदाको नक्कलहरू ह्वेनस छन्। एकातिर, यसले विश्वको दुर्गम भागहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि विकास स्टक जस्ता भरपर्दो सम्पत्तिमा लगानी गर्न अवसरहरू खोल्छ। कम्पनीहरूका लागि, यसले उनीहरूको लगानीको पोर्टफोलियोमा विविधता ल्याउन र लगानीकर्ताहरूको संख्या बढाउन मद्दत गर्दछ जुन युद्धहरू एक पटक राजनीतिक सीमाहरूद्वारा प्रतिबन्धित थियो।
विभिन्न प्रकारका क्रिप्टो कृत्रिम सम्पत्ति
हामी विभिन्न विकेन्द्रीकृत लगानी प्लेटफार्महरू हेरौं जुन संचालन गर्न विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्दछ तर तिनीहरूको कोरमा क्रिप्टो सिंथेटिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दछौं।
अब्राहम विकेन्द्रीकृत लगानी प्लेटफर्म हो जसले कृत्रिम सम्पत्तिहरू सिर्जना गर्न कोल्टोरलको रूपमा क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गर्दछ। एब्रा द्वारा प्रयोग गरिएको सिंथेटिक सम्पत्ति मोडलले बिटकॉइन र लिटकोइनको साथ सक्षम स्मार्ट सम्झौताहरू प्रयोग गर्दछ।
अबारा उदाहरणको साथ काम गर्ने तरिका वर्णन गरौं। यदि एक प्रयोगकर्ता एब्रा प्लेटफर्मको माध्यमबाट लगभग worth १००० को मूल्यको एप्पलको शेयर किन्न चाहान्छ भने फर्म अगाडि बढ्छ र $ १००० को मूल्यको बीटीसी एप्पल स्टकको मूल्यको बिरुद्द खडा गर्दछ। यदि शेयरको मूल्यहरु सार्छ भने, BTC को समानुपातिक रकम जोडिनेछ वा प्रयोगकर्ताको स्मार्ट सम्झौताबाट घटाइनेछ। तसर्थ, यदि प्रयोगकर्ताले बीटीसी फिर्ता लिने निर्णय गरे कि उनीहरूले स्टकको मूल्यको सम्बन्धमा जम्मा गरे भने, यो त्यो विशेष दिन / समयको शेयरको मूल्यसँग समानुपातिक हुन्छ।
यो चाखलाग्दो छ कि लगानीकर्ताले BTC मा छोटो स्थिति र एप्पलमा लामो स्थिति लिन्छ। यसको विपरीत, अब्राहम BTC मा एक लामो स्थिति लिन्छ जबकि एप्पल मा एक छोटो स्थिति लिन्छ। यद्यपि शाब्दिक होईन, प्रक्रिया लगभग बिटकोइनलाई एप्पल स्टकको प्रतिनिधिको रूपमा प्रयोग गर्नु जस्तै हो जुन शेयरको मूल्यको आधारमा मूल्यमा परिवर्तन हुन्छ।
Synthetix अर्को कृत्रिम सम्पत्ति प्लेटफर्म हो जसले व्यापारीहरूलाई मात्र व्यापार गर्न अनुमति दिँदैन, तर पियरको प्लेटफर्ममा मिन्ट सिंथेटिक मुद्रा पनि छ। सिंथेटिक मुद्रा टक्राउन सकिने हुनाले, व्यापारीहरूले कृत्रिम उत्पादनहरूमा मात्र पहुँच प्राप्त गर्दैनन् तर डलर, स्टक र सुन जस्ता गैर क्रिप्टो सम्पत्तिमा पनि एक्स्पोजर पाउँछन्। यद्यपि Synthetix मात्र एक वर्ष पुरानो हो, यो सिंथेटिक व्युत्पन्न करार मा more 69 मिलियन भन्दा बढी राख्छ।
Synthetix तीन फरक विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगहरूको संयोजन हो। प्लेटफर्मको आदानप्रदान हुन्छ, सिन्थेटिक एक्सचेन्ज र मिन्ट्र भनिन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरुलाई SNX भन्ने प्लेटफर्मको नेटिभ टोकन शेयर गर्न सक्षम गर्दछ, ताकि तिनीहरूले शुल्क कमाउन सक्नेछन् र नयाँ सिक्का टिप्न सक्नेछन्। त्यहाँ ड्यासबोर्ड पनि छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण सिंथेटिक्स नेटवर्कको सिंहावलोकनको साथ प्रस्तुत गर्दछ।
Synthetix तीन फरक विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगहरूको संयोजन हो।
के Synthetix अलग र भरपर्दो बनाउँछ बहु-आँसू जारी प्लेटफर्म, विनिमय, र एक प्रकारको जमानतको संयोजन हो। यसले कृत्रिम सम्पत्तिमा फिर्ता क्रिप्टोकरन्सीको लागि बजार सिर्जना गरेको छ। Synthetix द्वारा जारी सम्पत्ति को वर्ग डेरिभेटिभ्स, cryptocurrency, फिएट मुद्रा, र पहिले वर्णन गरिएको हरेक अन्य सम्पत्ति वर्ग शामेल छ।
Synthetix ले काम गर्ने तरीका एकदम सरल र सीधा छ। प्रयोगकर्ताले यी सिंथेटिक सम्पत्तिहरू सिर्जना गर्न SNX को रूपमा जमानत राख्छ। तिनीहरू बदल्न सक्छन् वा एक कृत्रिम विनिमय गर्न सक्छन् मैले अर्कोको लागि भनें। यो जमानत को पुन: प्रिन्टिंग एक Oracle को माध्यम बाट गरीएको छ कि प्रक्रिया मध्यस्थता बिना कुनै सही मध्यस्थ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ।
त्यहाँ अर्को विकेन्द्रीकृत प्लेटफर्म छ जुन विश्वव्यापी बजार पहुँच भनिन्छ। यो प्लेटफर्मले वित्तीय सम्झौतामा विशेषज्ञता दिन्छ र "प्रामाणिक रूपमा इमान्दार Oracle मेकानिजम" प्रयोग गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्मार्ट सम्झौताको प्रयोग गरेर आफ्नै वित्तीय उत्पादनहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ। दुबै Synthetix र UMA Ethereum मा चल्छ।
क्रिप्टोकरन्सीद्वारा जमानामा राखिएको सिंथेटिक मुद्रा मोडेलहरूले परम्परागत वित्तमा ठूलो असर पार्ने आशा गरिन्छ। यो सानो तर शक्तिशाली एभिन्यूको रूपमा देख्न सकिन्छ जसमार्फत क्रिप्टोकरन्सीले पारम्परिक वित्तीय इकोसिस्टममा यसको आन्तरिक बनाइरहेको छ। यसले क्राइप्टोरोन्सी प्रोसेसरहरू पारम्परिक सम्पत्ति व्यापारको लाभ उठाउनको लागि प्रस्ताव गर्दछ जबकि अझै क्रिप्टो इकोसिस्टम भित्र रहन्छ।
हामीले पहिले नै हेरेका थियौं कि अब्राहम र सिन्थेटिक्स जस्ता प्लेटफर्महरूले विश्वव्यापी व्यापार र व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको लागि सम्भावना खोल्दछन्। यो विशेषाधिकारको पहुँचको बिल्कुल विपरीत हो जुन संस्थागत लगानीकर्ताहरूले मात्र ग्लोबल डेरिभेटिभ बजारमा आनन्द उठाए।
वा छैन क्रिप्टो जमानाको सिंथेटिक सम्पत्ति एक ठूलो सम्झौता हुनेछ कि यो अनुमान को कुरा हो। यद्यपि यो सुरक्षित रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ कि क्रिप्टोको बढ्दो स्वीकृति, नियमन र कानुनीकरणसँगै, यो सम्भव छ कि कृत्रिम सम्पत्तिमा क्रिप्टो फिर्ता हुने।
कृत्रिम सम्पत्ति को सम्पूर्ण संसार अहिले नै सबैभन्दा नयाँ चरण मा हुन सक्छ, एक्लै क्रिप्टो बैक भेरियन्ट छोड्नुहोस्। यो, तथापि, तपाईंको साथ सुरू गर्न एक उत्तम विचार हुन सक्छ crypto सिंथेटिक सम्पत्ति प्लेटफर्म व्यवसाय अहिले नै किनभने आजको हार्बीन्गर भोलीको नेता हुनेछ, विशेष गरी यो व्यवसायमा जहाँ शुरुवाती चरा तिनीहरूलाई लिन बाध्य छ।
यदि तपाइँ ती इच्छुक उद्यमीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले तपाइँको सिंथेटिक क्रिप्टो सम्पत्ति प्लेटफर्म व्यवसाय सुरू गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँले गर्नुपर्ने सबै कुरा एउटा कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहनु हो जुन कृत्रिम क्रिप्टो सम्पत्ति प्लेटफर्म विकासमा विशेषज्ञता राख्छ।
सांप्रदायिक समाचार सिंथेटिक क्रिप्टो सम्पत्ति प्लेटफार्म विकास
पाँच मिनेटमा ल्यापटपबाट हार्ड डिस्क कसरी हटाउने? (चरण-देखि-चरण गाइड)